Qarax Al-Shabaab oo 15 ku diley Muqdisho - Sabahionline.com
Qarax Al-Shabaab oo 15 ku diley Muqdisho Febraayo 09, 2012
Tirada geerida ka dhalatay weerar argaggixiso oo Arbacadii (8-da February) lagu qaaday meel shaaha laga cabbo oo ku taalla Muqdisho ayaa gaartay ugu yaraan 15 sida uu sheegay Duqa magaalada Muqdisho, Maxamed Cali Nuur. Qodobbo la xiriira
Qof is qarxiyey oo xiriir la leh ururka al-Shabaab oo al-Qaacida la ollogga ah ayaa meel ka mid degmada Xamarweyne oo u dhaw aqalka madaxtooyada ku qarxiyey gaari ay qaraxyo ka buuxaan. "Waa fulayo beegsanaya bartilmaameedyada jilicsan – dad aan waxba galabsan oo iska shahaya,” ayuu yiri Nuur. Labaatan qof ayaa dhaawacantay oo ay labo xildhibaanno yihiin, ayuu yiri. Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda qaraxa iyagoo sheegay in miinada loola gol lahaa in lala beegsado saraakiisha dawladda ee jooga Hudheelka Muna, halkaa oo ah meel ay xildhibaannada iyo saraakissha amnigu deggan yihiin. "Waannu sida ugu ba’an u dhaleecaynaynaa weerarkan waxshinnimada ah,” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Boostada iyo Isgaarsiinta, Cabdulqaadir Xuseen Maxamed oo oraah jeediyey. “Ma ay laha ujeeddo aan ahayn in ay argaggixiyaan dadka Soomaaliyeed oo la xarbinaya noloshooda. Waxay tani muujinaysa xaasidnimadooda iyo sida aanay xushmo ugu haynin bani’aadamnimada. Muxuu kula yahay qoraalkan?
February 10, 2012 @ 08:29:13AM
Al-Shabaab waa koox argagixiso ah waana in la ciribtiraa.